Geofumadas - oo ku saabsan isbeddellada xilligan casriga ah - Geofumadas
Abriil, 2020 egeomates My
Sida ay u tagto Dijital ah waxay u leexin karto Caqabadahaaga Injineerka
Meelaha xogta iskuxiran kama hadlaan kaliya, waxay sidoo kale wadada ku marayaan mashaariicdaada dhismaha.
Ku dhawaad ​​dhammaan xirfadlayaasha injineerinka, naqshadaha, iyo dhismaha (AEC) waxay diirada saaraan sidii loo heli lahaa habab cusub oo lagu kordhiyo xuduudaha loona yareeyo la xisaabtanka ganacsigooda. Sababtoo ah tikniyoolajigu si dhakhso leh ayuu u socdaa, way adkaan kartaa maxaa yeelay waxaa jira ilo badan oo macluumaad laga heli karo. Waxay noqoneysaa kiis sameynta waqti loo adeegsado.
Laakiin sidee ayey ula xiriirtaa suuqayaasheena maalinlaha ah? Mid ka mid ah asxaabteyda ayaa ka helay emayl aad u xiiso badan macmiil milkiilaha ka shaqeeya oo leh:
Caqabadda ugu weyn ee na haysata ayaa ah in qandaraasleyaashu ay u muuqdaan in ay ka hadlayaan waqtiga la bixinayo qandaraaska, laakiin fulintiisa ayaa markaa joogsata, maadaama aysan mudnaanta koowaad siin kooxaha mashruuca. Hadaanu nahay horumarin shirkadeed, waxaan dooneynaa inaan noqono hal abuuro cusub isla markaana aan iskaashi la lahaano qandaraasleyaasha oo runtii noqon doona kan ugu horeeya ee korsanaya awoodna u leh samatabbixinta.
Way adag tahay in la go'aamiyo waxa hal-abuurnimo dhismaha ah uu bixiyo maalmahan. Miyuu yahay terabyte data, oo loo keenay macmiilka iyada oo aan la haynin xog taariikhi ah ama metadata ku lifaaqan? buugga soo saaraha qalabka asalka u ah sawirrada; ama sawirro iyo xog aan u hoggaansami karin hantida la siiyay sida loo dhisay / kama dambaysta ah?
Nidaam mideysan, sida ProjectWise iyo AssetWise, waa shardi u ah milkiilaha hantida nooc kasta oo mashruuc ah. Sida aan uga wada hadlay qodobbada 3aad iyo 4aad ee taxanahan (Sida isha kaliya ee runta ahi u beddeli karto warshadaha naqshadeynta kaabayaasha iyo sababta ay ugu baahan tahay inay saxdo hannaanka qaabeynta, siday u kala horreeyaan), waxaa ugu wanaagsan in laga qaybgeliyo nidaam ka hor intaysan goor dambe dhicin.
Waxaa jira nidaamyo fara badan oo suuqa ka jira, mana jiro mid ku habboon dhammaan. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay mashruucyo waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha ah, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso deganaansho. Ma rabtid dhibaatada inay sii socoto, naqshadeynta ilaa dhismaha illaa howlaha. Dhowr macaamiil aan la shaqeeyo ayaa dhibaatadan uga soo dhowaanaya xagal gabi ahaanba ka duwan. Waxay ugu yeeraan "injineer ka noqoshada dhibaatada."
Haddii aad kaliya raadineyso guul waqti-gaaban, waxaad ku dhamaan doontaa xog badan oo mugdi ah, oo ah noocyo kale oo dhibaatooyin ah. Macaamiil ahaan, waxaad dooneysaa in mashruucaagu noqdo mid buuxiya shuruudaha BIM.
Milkiileyaasha shirkaddu waxay isweydiinayaan seddexdan su'aalood:
Maxaan u baahanahay inaan maareeyo hantida, gaar ahaan maadaama ay tahay qaybta ugu dheer ee wareegga nolosha mashruuca?
Maxaan ugu baahanahay dhismo, taasina waxay ku xiriirtaa maareynta hantida?
Maxaan ugu baahanahay qaabeynta iyo suurta galnimada, iyo xiriirkaas xiriir la leh barnaamijka maaraynta mashruuca?
Si aad halkaa uhesho, waxaad u baahantahay CDE: jawiga kuxiran macluumaadka,
Ma ahan deegaan xog aruurin guud ah.
Labada nidaamba waxay isweydaarsadaan xogta mashruuc, laakiin Iskuxirka Xogta Deegaanka (CDE) ayaa ah isha kaliya ee runta isku habboon. CDE waxay maamuli doontaa, kala diri doontaa, uruurin doontaa oo keydin doontaa xogta inta mashruucu socdo oo dhan. Noloshaani waxtarka leh waxay ka dheeraan kartaa sida dadku u maleynayaan, gaar ahaan markaad tixgeliso tirada dib-u-cusboonaysiinta hanti ayaa dhici karta muddo 30 sano ah. Asal ahaan, BIM waxay hubisaa in dhammaan macluumaadka saxda ah lagu heli karo qaab sax ah, taasoo u oggolaaneysa kooxda inay sameyaan ikhtiyaar sax ah inta lagu jiro nolosha hantida. Fikradda qaldan, gaar ahaan maalmihii hore, waxay ahayd in BIM ay ku saabsanayd abuurista moodel 3D madax-bannaan. Tani run ma aha. Taabadalkeed, BIM waa asal ahaan habka loo diyaariyo loona maamulo.
Xarunta BIM waxaa ku yaal waajib muhiim ah: shuruudaha macluumaadka loo shaqeeyaha. Shuruudahan ayaa qeexaya macluumaadka uu shaqaaleeyuhu doonayo inuu horumariyo si uu u fuliyo hantida. Loo shaqeeyaha ayaa aasaasaya dukumintiga heshiis bilowga ah, isagoo hubinaya in macluumaadka ku habboon la abuuray iyo in nidaamyada loo isticmaalo mashruuca oo dhan.
Markii aan ka wada hadalno CDE, ereyga xiga ee aan u baahan nahay inaan qeexno waa mataano dijital ah, oo ah metelaadda dijitaalka ah ee hanti jireed, hanaan, ama nidaam, iyo sidoo kale macluumaadka injineernimada ee noo oggolaanaya inaan fahamno oo aan ku dayno waxqabadkiisa. Caadi ahaan, mataanaha dhijitaalka ah ayaa si joogto ah loogu cusbooneysiin karaa ilo badan, oo ay ku jiraan dareemayaal iyo sahamin joogto ah, si ay ugu matalaan heerkiisa, xaaladdiisa shaqo, ama jago waqti dhow. Mataanaha dijitaalka ah ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay arkaan hantida, hubiyaan heerka, qabtaan falanqaynta, iyo maskaxda si ay u saadaaliyaan una habeeyaan waxqabadka hantida.
Mataanaha dhijitaalka ah waxaa loo isticmaalaa sidii lagu habeyn lahaa howlgalka iyo dayactirka hantida jir ahaaneed, oo ay ku jiraan nidaamyadooda iyo howlahooda. Sida macluumaadka mataanaha dijitaalka ah la falanqeeyay, casharo badan ayaa la baran karaa, iyadoo la siinayo kooxda fursadaha inay ku soo celiyaan qiimaha ugu badan ee hantida dhabta ah.
Casharro ayaa laga baran karaa iyadoo la adeegsanayo jilitaanka dhijitaalka ah si loo arko goorma ayay tahay waqtiga ugufiican ee lagu dayactiro qalabka iyadoon wax saameyn ah ku yeelan howlaha howlgalka. Markaad ku darto isugeynta dareemayaasha iyo sirdoonka macmal, waxaad heleysaa falanqeyn xogta-waqtiga dhabta ah iyo isbarbardhiga xogtan iyo xogta taariikhiga ah.
Sida ku xusan Mabaadi'da Gemini ee ay daabacday Xarunta loo yaqaan 'Digitally Constructed Britain' bishii Diseembar 2018, mataanaha dhijitaalka ah waa "mataliil dijital ah oo macquul ah oo ah wax jir ahaaneed." Waxa mataanaha dijitaalka ah kaga duwan nooc kasta oo kale oo dijital ah waa xiriirkiisa ay la leedahay mataanaha jireed. " Mataanaha dhijitaalka ah ee 'National Digital Twin' waxaa lagu qeexaa "hab-nololeedka mataanaha dhijitaalka ah ee si ammaan ah ugu xiran xogta wadaagga ah."
Dib-u-milicsiga e-maylkay saaxiibkay ka helay milkiilaha milkiilaha hawl-wadeennada, waxaa iska cad in ururradu ay rabaan inay ku xoojiyaan inta ugu badan ee suurtogalka ah meel keliya oo daruur ku saleysan.
Kaliya ma aha in silosooliyo maxalli ah oo macluumaad nuqul ka mid ah laga saaro, waxay sidoo kale abuuraan awoodda ay ugu furi karto macluumaadka heerka cusub ee waxqabadka.
CDEs waxay door hoggaamineed ka ciyaaraan isgaarsiinta dhaqamada ugu wanaagsan iyo qulqulka qandaraaska ee warshadaha dhismaha. Kuwani waa aasaaska isku xirnaanta dhijitaalka.
Sababta ay u liidato macluumaadka qaabeynta macluumaadka ee liita ayaa ku kacaya mashaariicdaada
Mashaariicda dhismaha waxay noqdeen kuwa sii adkaanaaya xalkana bey'ad ku xidhan macluumaadka.
Ka dib markii aan qadka usbuuc dhammaadka qoys la wadaagaya saaxiib saaxiib horumarin leh oo dhibaato weyn ku qaba mashruuc dhowaan ka dhacay badhtamaha magaalada, xaaladdu waxay iga dhigtay inaan ka fikiro sida qandaraasyadu isu beddeleen oo ay isu beddali doonaan qulqulka iyo helitaanka xogta. Aniga iyo saaxiibkay waxaan wada qaadanay dhammaadka usbuuca dhammaadka waxaan ka wada hadalnay naqshadeynta iyo mashaariicda dhismaha. Si goobta loo dhigo, xuduuda mashruucaan gaarka loo leeyahay (PRS) waxay ahaayeen kuwo si toos ah toos ah.
Dhibaatooyinka mashruuca saaxiibkay guud ahaan, waxaa u sabab ahaa tirada dib-u-shaqeynta daruuriga ahayd iyo mas'uuliyadda, maadaama ay jireen isbadallo taxane ah oo isdaba joog ah. Iyada oo maanka lagu hayo mashruucan, waxaan bilaabay inaan baadho inta ay tahay qiimaha dib-u-shaqaynta ay ku kacayso warshadaha.
Haddii aad aqriso qaar ka mid ah daraasadaha caalamiga ah, warbixinnadan waxay soo jeedinayaan in qarashyada tooska ah ee khaladaadka laga fogaado ay yihiin 5% qiimaha mashruuca. Ka shaqeynta tirada guud ee suuqa, boqolkiibaani wuxuu ku darayaa ugu dhawaan ilaa GBP 5 bilyan (USD 6,1 bilyan) sanadkiiba guud ahaan Boqortooyada Midowday. Kadib markii la tixgeliyo tirada digniinta faaiidada ee la soo saaray, qiimahan ayaa ka weyn celceliska heerarka faa'iidada inta badan qandaraasleyaasha ka shaqeeya suuqa ugu weyn.
Daraasad ay sameysay Get It right Initiative (GIRI) sanadkii 2015 waxay muujineysaa qiimo aad u layaab badan. GIRI waxay ka soo baxday wadahadaladii ku jiray Gudiga Fikrada ugu Wanaagsan ee Machadka Injineerrada Madaniga ah. Markii lagu daro kharashaadka aan la qiyaasi karin iyo kuwa aan tooska ahayn, GIRI waxay ku qiyaastay inay udhaxeyso 10% iyo 25% qiimaha mashruuca, qiyaastii 10-25 bilyan GBP (12-30 bilyan oo doolar) sanadkiiba.
Baadhitaanka GIRI wuxuu cadeeyay 10ka sababaha ugu sareeya ee qaladka, kuwaas oo kala ahaa:
Qorshe aan ku filnayn
Naqshadeynta naqshadeynta dambe
Macluumaadka naqshada ee si xun loogu wargaliyo
Dhaqanka xun marka loo eego tayada.
Macluumaadka naqshadeynta si xun u habaysan
Daryeel aan ku filnayn naqshada dhismaha.
Cadaadis xad dhaaf ah oo ganacsi (dhaqaale iyo waqti)
Maareynta xun iyo qaabeynta interface
Xiriir aan habooneyn oo ka dhexeeya xubnaha kooxda.
Xirfadaha kormeerka oo aan ku filneyn
Waxaan u arkay mawduuca maareynta naqshadeynta xiisaha leh. Baadhitaanka GIRI wuxuu muujiyey inay jirto maqnaansho isku-dubbaridan, taas oo keentay isku dhac ka dhex dhacay xafiiska naqshadaynta iyo silsiladda sahayda ee goobta, taasoo horseedaysa dib-u-hawlgal, dib-u-dhac iyo kharash kordhin.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xal sahlan oo loogu talagalay dhibaatooyinka badan oo lagu muujiyey warbixinta GIRI: teknolojiyadda ku saleysan daruuriga. Nidaamyada sida ProjectWise iyo SYNCHRO waxay yareyn karaan dhowr ka mid ah dhibaatooyinkaas iyagoo bixiya:
Jawi iskaashi aamin ah oo aamin ah halkaasoo dukumiintiyada, naqshadaha, iyo moodallada dib looga eegi karo goobta iyadoo la adeegsanayo aaladaha mobilada, sida taleefannada gacanta.
Awoodda raadraaca iyo si aan kala go ’lahayn u hubinaysaa in agabyada saxda ahi ay si toos ah uga imanayaan warshadda.
Nidaamyada bixin kara liiska hubinta iyo qaylo-dhaanta si loo hubiyo in mashruucu usocdo jihada saxda ah.
Si kastaba ha noqotee, sida aan ku aragnay Bentley baaritaankiisii ​​ugu dambeeyay (looga wada hadlay maqaalkeygii hore Daaro Faa'iidooyinka Going Digital ee Dhismaha), si kastaba ha noqotee, qandaraasleyaasha intooda badan uma adeegsadaan tiknolojiyadan faa iidadooda. Sahanka Bentley wuxuu ogaaday in ku dhawaad ​​kalabar shirkadaha (44.3%) ay xaddidan yihiin ama aaney lahayn aragti shirkadeed ama wax qabad mashruuc. In kasta oo kalabar jawaabeyaasha ay fahmeen muhiimadda ay leedahay aruurinta xogta mashruuca, hadana ma aysan awoodin inay inta ugu badan ka dhigaan tirakoobka. Shirkadaha aan isticmaalin nidaamka Mashruuca Mashruuca ayaa ka maqan:
Dardargelinta socodka shaqada iyo qaabeynta
Injineerada ayaa lagu qiyaasay inay ku qaataan ilaa 40% maalinkooda raadinta macluumaadka ama sugaya soo dejinta feyl. Qiyaas inaad siiso qof walba inuu si dhakhso leh ugu helo xogta saxda ah goorta iyo meesha ay uga baahan yihiin.
Wadashaqeyn la’aan jahwareer
Isku habee kooxahaaga jawi xog urursan si loo yareeyo carqaladeynta isgaarsiinta. Hesho aragti guud oo dhammaan macluumaadka iyo ku tiirsanaanta si qof kastaaba u helo macluumaadka ugu dambeeya farahooda.
Ku hel kalsoonida iyo xakamaynta daruuraha
Ku xir kooxda mashruucaaga iyo silsiladdaada sahayda adeegyada daruuraha. Hoos u dhig caqabadaha IT, gaabinta arrimaha waxqabadka WAN, xajmiga xajinta, iyo amniga xogta.
Ugu dambayntii, aniga iyo saaxiibkay waxaan ku heshiinay dhalo cajiib ah oo porto ah, in sida ugu wanaagsan ee looga fogaado in la caayo ay tahay innaga oo ah nafsaddayada. Iyadoo aan la adeegsan tikniyoolajiyadda, barnaamijyadu waxay dhuminayaan waqti qaali ah (oo markaa kharashaadka keenaya) soo socda oo la socda isbeddelada naqshada.
Maxaad ugu baahan tahay inaad hesho qaab naqshadeed oo sax ah
Hal il oo run ah hagaajin kartaa hannaankaaga qaabeynta si loo helo gaarsiinta mashruuca wanaagsan.
Sida safarada badan, waxaan u safraa London ilaa Euston. Iyada oo la qorsheynayo in la dhiso 330 mayl oo ah waddooyin cusub oo la aasaasay, mashruucu wuxuu sababay carqalad aad u yar safarkayga ilaa hadda. Maaddaama mashruucu adeegsanayo Bentley's ProjectWise, Waxaan la yaabay waxa ka dambeeya darbiyada dhismaha.
Waxay soo baxday in ay jirto xabaal weyn oo leh in kabadan 40,000 oo hadhaagii bini aadamka halkaas oo HS2's Euston ay maalin uun degi doonaan. Waxa markii hore Xabaalaha St James 'Gardens The goor dhow albaab u noqon doona halka tareenadu ka baxaan London rakaabkuna waxay ku safri karaan ilaa 225 mph.
Ilaalinta 40,000 oo xirmooyin oo ah bini aadam waxay umuuqataa hawl fudud in mashruucan xiisaha badan la barbar dhigo dhisida albaabka London ee HS2. Markii kooxda gaarsiinta ay sii socdaan, waxay si tartiib tartiib ah u horumarin doonaan fahamka shuruudaha qaabeynta ee uu aasaasay macmiilka iyo kooxda qaabeynta si ay ula jaanqaadaan nuqulka qaabeynta asalka ah, oo ay ku jiraan qaabka iyo shaqada mashruuca.
Anigoo safarka taagan ee saldhiga hadda jira ee Euston, oo aan doonayo inaan fiirino guddiga macluumaadka oo aad u raagtay in dib loo dhigo tareenka in la siiyo aalad, Waxaan marka hore ogahay inta isbeddel ah ee looga baahan yahay saldhigga inuu sifiican u shaqeeyo.
Waqtigaan, kooxda gaarsiinta ayaa la shaqeyn doona kooxda naqshadeynta si ay u horumariyaan una ballaariyaan waxa looga baahan yahay si ay u noqdaan fasiraad qoto dheer oo naqshadeyn ah oo loo dhiso sawirro.
Markii ay labada koox horay u socdaan, waxay xasilloon tahay duufaanka ka hor, kahor intabadan mawjadaha isbedelka iyo naqshadeynta kaladuwan. Dib-u-habeynta naqshadeynta, arrimaha iyo mas'uuliyadda ayaa sababi kara kala qeybsanaan kasta oo ka timaadda qaabeynta iyo kooxda gaarsiinta.
Faallooyinkaani waxay ku qaadataa waqti dheer kooxda in ay abuuraan oo ay duubaan, oo ay weheliso jahwareer in dib loo eego, la oggolaado, oo la baro silsiladda sahayda ee gaarsiinta.
Haddii aan dib ugu laabanno bilowga mashruuc kasta, kaliya ma ahan mashruuc kaabeyaasha waaweyn ah, macaamilku wuxuu la shaqeyn doonaa kooxda naqshadeynta wuxuuna dhisi doonaa soo koobis waxa mashruucu u baahan yahay inuu keeno. Marka la soo koobo, macaamilku wuxuu dhisi doonaa dhowr waxqabad oo muhiim ah iyo shuruudo, oo ay tahay in qaabeyuhu buuxiyo.
Is dhexgalka macmiilka ayaa raaci doona afarta talaabo:
Sawirada dhismaha / sawirada
Wali waan xasuustaa markaan ka bilaabay ganacsiga dhismaha. Waqtigaas ka dib, wada macaamillada macaamiishaani waxay ku dhici lahaayeen warqad, ammonia ur ka yimaada koofiyadaha buuxinaya qolka inta ay diyaarinayaan baakadaha waxayna u kala jabeen edbinta loo baahan yahay. Maanta, waa xog iyo moodel 3D ah oo waxyaabaha ka sii adkayn kara.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xal si looga fogaado dhibaatooyinkaas. Software sida ProjectWise iyo SYNCHRO waxay u ogolaanayaan kooxda qaabeynta inay ku dhisaan 3D kahor inta aan la dhisin oo loo qeybiyo xogtaas hab habaysan oo la xakameynayo iyo wax wada qabsi ah. Hawshani kaliya waxay wanaajineysaa xiriirka ka dhexeeya daneeyayaasha iyo kooxda naqshadeynta oo dhan, laakiin waxay sidoo kale yareyn kartaa walaaca kala duwan ee ka jira mashruuc kasta. Waxaan ka ognahay daraasadahayaga, sidoo kale kuwa ay fuliyeen shirkadaha sida McKinsey, in 20% ee mashaariicda ugu waaweyni ay buux-dhaafiyeen 80% ay ka badan yihiin miisaaniyadda.
Baahida loo qabo in la xakameeyo lana yareeyo kala duwanaanshahan waa muhiim.
Haddii khaladaadka nashqadaha la sameeyo, nidaamyada hadda jira waxay fududeynayaan hagaajinta qaladkaas. Muhiimadda ugu weyn ayaa ah in isbeddelada iyo macluumaadka si dhakhso leh loo wadaago, iyagoo u oggolaanaya kooxda gaarsiinta iyo silsiladda sahayda inay u falceliyaan qaab sababaya saamaynta ugu yar goobta.
Haddii aan eegno warbixintii ugu dambeysay ee Wasaaradda Deegaanka, Cuntada iyo Arrimaha Reer Miyiga (DEFRA), qashinka dhismaha ayaa weli ah mid aad u sarreeya oo badanaaba waxay ka yimaadaan dib u adeegsiga. Dhaqankani wuxuu ugu dambeyntii badbaadin doonaa lacag, waqti, iyo agab.
Mott MacDonald wuxuu arkay faa'iidooyinkaas markii uu hirgaliyay hal il oo run ah oo ka shaqeeya shaqadiisa Mashruuca East Thames Tideway. Iyada oo ah naqshadeeye hogaan ah, ururku wuxuu ujeedadiisu tahay inuu hagaajiyo nidaamka bulaacadaha qashinka ee London. Waxa intaa u dheer maaraynta mashruuca adag ee $ 4.000bn ($ 4.900bn), Mott MacDonald ayaa loolan ugu jiray inuu keeno laba sano ka hor jadwalka. Si kastaba ha noqotee, haddii ururku u oggolaan waayey iskaashi aan kala go 'lahayn oo ka dhex jira dhammaan kooxdeeda mashruuca fidsan, waxay halis ugu jirtay inay gadaal u dhacdo oo ay ku guul darraysato inay ka soo baxdo horumarro muhiim ah.
Si uu u guuleysto, Mott MacDonald wuxuu ku qasbanaaday inuu hubiyo in kooxdiisa mashruuca oo dhan, oo ay ku jiraan xubno ka socda ururro fara badan oo kala duwan, naqshad naqshadeyn, iyo goobo juquraafiyeed, ay si fudud u heli karaan oo ay isdhaafsan karaan macluumaadka ugu dambeeyay ee jawiga maaraynta ah. Mott MacDonald wuxuu ku dhammeystiray xalkaan isagoo isu keenaya xubnaha kooxdiisa isla markaana naqshadeeya waxyaabaha kujira jawiga xogta ku xiran. Xubnaha kooxda 12ka naqshadood ee naqshadeynta ayaa hadda abuuri kara, wax ka beddeli kara oo keydin kara kumanaan gaarsiin ah oo hal meel ah, si fudud ay u heli karaan ururada kaqeyb galaya Yurub oo dhan, oo ay ku jiraan macaamiisha dib u eegista iyo ogolaanshaha.
Iyada oo hoos loo dhigayo wada shaqeynta mashruuca, Mott MacDonald wuxuu siiyaa macaamiisha tayo tayo leh kahor jadwalka oo wuxuu gartay inay jiraan:
32% kaydinta waqtiga wax soo saarka naqshadeynta
80% dhakhso u helitaanka dukumiintiyada iyo aaminaada dhammaan kaqeybgalayaasha mashruuca
76% ogolaanshaha xirmada macaamiisha markii ugu horeysay.
Maaddaama kumbuyuutarradu culeyska ka saaraan nidaamyada naqshadeynta, codsiyada sida ProjectWise iyo SYNCHRO waxay kaa caawin karaan inaad si wanaagsan u maareyso macluumaadka mashruuca adoo aasaasaya hal il oo run ah si loo badbaadiyo waqtiga loona yareeyo khatarta iyadoo la hubinayo in macluumaadka ugu dambeeyay uu yahay. Waxaa dabagal ku sameeyay, maareynayay oo marin looga hayey mashruucaaga. Dardargelinta wadashaqaynta kooxda ee barnaamijyada waxay ka caawineysaa iskuxirka kooxdaada jawi macluumaad kuxiran. Waxay wanaajin doontaa wax soo saarka waxayna hubin doontaa in macluumaadka la baaro oo lagu maareeyo qulqulka wadashaqeynta.
Maareynta mashruuc ka wanaagsan waxay kuu horseedi kartaa faham wanaagsan si loo helo go'aanno waqti dheeri ah oo la isla ogyahay. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka gudubto caqabadaha suurta galka ah ee mashruucan iyadoo la kordhinayo daah furnaantiisa guud. Kadib warbixintii ugu dambeysay ee ka soo baxday guddiga xisaabaadka dadweynaha ee loo yaqaan 'Commons Public Account Committee' ayaa dhaleeceysay maamulka qandaraaslaha mashruuca, waxaa iska cad inay jirto baahi weyn oo loo qabo cadeyn dhamaan mashaariicda, oo ay kujirto xarunta cusub ee tareenka Euston iyo HS2. .
Sidee isha kaliya ee runta ahi u beddeli kartaa warshadaha qaabeynta kaabayaasha
Iyada oo ay ka soo baxdo xog badan iyo xog ururinno, weligeed muhiim uma ahayn naqshadeeyayaasha iyo qandaraasleyaasha inay adeegsadaan il keliya oo runta ah.
Dhawaan Magaalada New York, waxaan ogaannay in dhismaha muraayadaha dhalooyinka lagu mamnuuci karo taas oo qayb ka ah isku dayga lagu yareynayo qiiqa hawada ka baxa 30%. Duqa magaalada Bill de Blasio ayaa sheegay in dhalada hore ee muraayadaha indhaha ah ay "aad u liito" sababtoo ah tamar aad u fara badan ayaa ka soo baxda muraayadda.
de Blasio waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto sharci mamnuucaya dhismaha muraayadaha cusub ee dhalada una baahan u baahan dhismooyinka quraaradaha ee hadda jira in la casriyeeyo si ay ula kulmaan tilmaamaha kaarboonka cusub ee adag.
Cadaadiska saaran bulshada nashqadeynta ayaa hada xitaa ka badan. Waxaan soo aragnay marar badan in mashaariicda maanta ee naqshadeynta ay ka adag yihiin oo baahi badan yihiin weligood. Si kastaba ha noqotee, iyadoo badhasaabyada magaaladu ay sii kordhayaan codbixinta ku saabsan naqshadeynta iyo waxqabadka, oo ay ku jiraan Duqa Magaalada London Sadiq Kan diidmada qorshayaasha cusub ee dhismayaasha cusub ee ay qorsheeyeen Foster + Partners, naqshadeeyayaashu waa inay miiska kusoo laabtaan. Naqshadeynta naqshadeynta waxa kaliya ee aan loogu baahnayn kaliya laakiin sidoo kale bulsho ahaan iyo deegaan ahaan
Marka la eego biilka suurtagalka ah ee de Blasio, waxaan arki karnay koror caalami ah oo ku saabsan dareemayaasha mashruucyadeena, taas oo ah mid cajiib u ah mataanaha dhijitaalka ah iyo mataanaha waxqabadka. Si kastaba ha noqotee, aqoonta ay u baahan yihiin qaabeynta iyo kooxda keenida ayaa si adag ugu dhaqaaqday inay la socdaan teknoolojiyadda cusub. Maaddaama ay Mashaariicdani ku koraan cabbir iyo adkaanta, sidoo kale baaxadda kooxda gaarsiinta. Adigoo raadraacaya dhammaan sawirada, xirmooyinka macluumaadka ayaa ka adkaan kara mashruuca laftiisa.
Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo maareynta mashruuca laga soo bilaabo marxaladi ugu horreysay ee mashruuca, kaasoo u oggolaanaya kooxda inay xakameeyaan soo-saarista xog-ururinta. Iyada oo qaddarka badan ee xogta hadda ku lifaaqan mashruuc, loo baahan yahay il keliya oo ka mid ah runta la xoojiyey ayaa loo baahan yahay. Waxaad ka baran kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan mowduucyadan adigoo aqrinaya maqaalkeygii hore ee xogta silos (Maxaad uga fogaaneysaa xogta silos ee kormeerka mashruuca gawaarida) iyo xogaha weyn (Digitizing with Big Data). Isha keliya ee runta ahi waa inay maamusho dhammaan qulqulka mashruucyada iyadoo la waafajinayo habraaca qandaraasyada. Qulqulka shaqadan ayaa la xiriirin kara codsi isbedel ama kala duwanaansho fudud. Mid kasta oo ka mid ah dukumiintiyadan ayaa lahaan doona jid ay iyagu raacaan oo xiritaankooduna uu dhammaan doono.
Wershadaha dhismaha ayaa mar horeba laga codsaday inay abuuraan hal kayd oo macluumaad, isha kaliya ee runta ah. Boqortooyada Midowday, dowladda ayaa u ololeyneysa warshadaha inay soo bandhigaan 'silsilad taxane ah oo xog ah', taas oo macnaheedu yahay dhisme kasta waa inuu lahaadaa diiwaan dijital ah ee dhammaan hantida. Maaddaama dad badan oo ku jira qaabeynta iyo kooxda gaarsiinta laga codsado inay soo ururiyaan xogta, sida ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo qaddarka xogtani waa iyada oo loo marayo kontarool qandaraasyo ah iyadoo la adeegsanayo qulqulka shaqada si aad u cad oo qeexan.
Adeegsiga jawi xog furan oo iskuxiran waa mid lama huraan ah maadaama ay kooxda siineyso hal calaamad oo ay ku maareeyaan dhammaan macluumaadka. Halkani waa meesha mashruucan ku saleysan ee Mashruuca Bentley ee kuxiran Bentley uu gacan ka geysan karo xakameynta xogta ka dibna uu bixiyo il keliya oo runta ah, iyadoo si aad ah loogu beddeli karo isticmaalka maalinlaha ah.
Jawiga xog ururinta ayaa fure u ah mashruuc kasta. Waxay yareysaa walbahaarka waxayna kooxda siisaa fursad ay ku hesho dhammaan macluumaadka loo baahan yahay, ha ahaato arrimaha qaabeynta, RFIs, codsiyada wax laga beddelo ama dukumiintiyada qandaraaska. Macluumaadkaan waxaa loo arki karaa warqad fudud PDF ama qaab 3D ah.
Iyada oo la adeegsanayo socodka shaqo ee aasaasay, xubnaha kooxda ayaa si otomaatig ah u arki doona isbeddelada naqshadeynta ee looga baahan yahay hannaanka go'aanka, iyagoo u oggolaanaya inay si dhakhso leh go'aankaas u gaaraan.
Adeegsiga nidaamka daruuriga ah wuxuu macnaheedu yahay kooxdu inay si dhammaystiran u hesho dukumiintiyada oo dhan, ama iyada oo loo marayo aaladda moobaylka ee goobta ama kombuyutarka desktop-ka ee xafiiska. Awooda ayaa qofkasta si buuxda uga warqabin horumarka mashruuca.
Adeegsiga isha kaliya ee runta ah waxay yareysaa tirada khaladaadka marka xogta laga guuro hal nidaam loona wareejiyo mid kale. Muuqaalkaani wuxuu kaloo yareynayaa waqtiga ku bixitaanka raadinta macluumaadka saxda ah, wuxuu yareynayaa qaddarka shaqeynta ee ay sababaan khaladaadka goobta.
Qulqulka shaqada ee loo baahan yahay wuu ka duwanaan doonaa mashruuc ilaa mashruuc, sababtoo ah shuruudaha qandaraaska iyo codsiyada wada xiriirka macaamiisha. Sidaa daraadeed, abuurista qulqulka howlahan waa inuu ahaadaa mid fudud oo dabacsan sidaa darteed, shirkad ahaan, waxaad ku ilaalin kartaa masuuliyadaada qaab macquul ah. Adeegsiga nidaam sida ProjectWise wuxuu siin doonaa aragga wanaagsan iyo qulqulka shaqada oo la xakameeyo Sidaa darteed, iyadoo la siinayo xog muhiim ah oo muhiim ah, mala-awaalka iyo isku dhacyada waa la baabi'in doonaa
Tusaale urur u adeegsaday Mashruuca aragtida wanaagsan iyo qulqulka shaqooyinka la xakameeyo waa iskaashiga u dhexeeya Dragados SA iyo London Underground Limited.
Ururadu waxay mas'uul ka ahaayeen kormeerka mashruuc 6.07 bilyan GBP ($ 7.42 bilyan) oo loogu talagalay Xarunta Bangiga-taallada, oo ka mid ah nidaamyada tareenka dhulka ugu adag ee Boqortooyada Midowday.
Si loogu guuleysto, Dragados iyo dhulka hoostiisa ee London waxay u baahnaayeen inay maareeyaan shabakad ballaarinaysa iskaashatada mashruuca, waxaa ku jiray 425 isticmaale shaqsi 30 shirkadood oo kala duwan, si loo hubiyo in kumanaan alaab soo-saareed ah la abuuray, dib loo eegay loona ansixiyay shil la'aan.
6.07 bilyan GBP (7.42 BIL USD)
KHUDBADDII DIIWAANAHA DIIWAANKA LAGU SAMEEYEY IN AY SAMEEYSAAN IN LAGU SAMEEYEY, LA'AANAYO OO AY KU SAABSAN YAHAY KHATARAHA
Qaado Qiimaynta Digitalka ah ee Bentley oo arag sida aad ugu horumarin karto ganacsigaaga.
Qoraa | Mark Coates
Agaasimaha Suuqgeynta Wershadaha iyo Soo-gaarsiinta Mashruuca
Nidaamyada 'Bentley Systems' waa shirkadaha ugu horreeya ee bixiya xalka barnaamijyada softiweerka, injineerrada, aqoonyahanada geospatial, kuwa wax dhisa, iyo milkiilayaasha milkiilayaasha naqshadeynta kaabayaasha, dhismaha, iyo howlaha. Bentley's MicroStation injineernimada iyo codsiyada BIM, iyo adeegyadeeda mataanaha ee Cloud, hormarinta mashruuca (ProjectWise) iyo waxqabadka hantida (AssetWise) ee gaadiidka iyo shaqooyinka kale ee dadweynaha, yutiilitida, warshadaha iyo dhirta awooda. Kheyraadka, iyo xarumaha ganacsiga iyo hay'adaha.
Nidaamka Bentley wuxuu shaqaaleeyaa in kabadan 3,500 asxaab, wuxuu sameeyaa dakhli sanadle ah $ 700 milyan 170 wadan, wuxuuna maalgaliyay in kabadan $ 1 billion cilmi baaris, hormarin, iyo kasbasho tan iyo sanadii 2014. Tan iyo markii la aasaasay 1984, shirkada waxay lahaatay inta badan lahaanshaha shan walaalo ah oo aasaasay Bentley. Saamiyada Bentley waxaa lagu hayaa casuumad ku saabsan suuqa gaarka loo leeyahay ee NASDAQ.
Post Previous" Hore Magaalooyinka Dijitaalka ah - sida aan uga faa'iideysan karno tikniyoolajiyadaha sida waxa SIEMENS bixiso
Post Next Joomatik iyo Cilmiga Dhulka Sanadkii 2050Next »